Zimbabwean Singer Fungisai in Court for Negligent Driving - allAfrica.com
The controversial singer Fungisai Zvakavapano-Mashavave has appeared in court on allegations of negligent driving after she lost control of her Mercedes Benz vehicle and rammed into three other vehicles.
Gospel artist Fungisai Zvakavapano Monday convicted for causing a road accident which left four vehicles damaged and injured one person. Read more »
Zimbabwe: Musician Fungisai in Court for Negligent Driving
Gospel artiste Fungisai Zvakavapano was Monday dragged to the courts for causing a road accident which left four vehicles damaged, injuring one person in the process. Read more »
Zimbabwe: Gospel Musician Fungisai in the Dock
Musician Fungisai Zvakavapano yesterday appeared in court on allegations of negligent driving after bumping into a vehicle she was following too closely. Zvakavapano (36) allegedly… Read more »